कांग्रेसभित्र भूईचालो : देउवा तनावमा, कोइराला परिवार विकल्प खोज्न थाले • Janaboli
काठमाडौ । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेसको पक्षमा नतिजा नआउने देखिएको छ । कांग्रेसले अधिकांश स्थानमा हार्दै गएपछि अहिले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै सभापति देउवाको राजिनामा खोजिने हल्ला चलेको छ । मतगणनाको सुरुआती रुझानले यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्ने र वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने निश्चित भएको छ । पहिलो चरणमा भएका ३२ जिल्लामा माओवादी र एमाले नेतृत्वको बाम गठबन्धनले बढी सिट जितेपनि दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ४५ जिल्लामा कांग्रेसको परिणाम राम्रो आउने आँकलन गरिएको थियो । तर त्यहाँपनि त्यस्तो नभएपछि अहिले कांग्रेसमा भूचालो गएको छ । यता कांग्रेसभित्रै कोइराला परिवारले नै सभापति देउवाको राजिनामा माँग्ने तयारी गरेको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेताहरु डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला नै टिकट वितरणमा देउवाले गलत गरेको भन्दै सुन्तुष्ट थिएनन् ।देउवाले परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसकेको र, सही र योग्य नेताहरुलाई टिकट नदिएको कोइराला परिवारका नेताहरुको आरोप छ ।
देउवा तनावमा अब कोइराला कि पौडेल ?
काठमाडौं । मतगणनाको सुरुआती हेर्दा नेपाली कांग्रेस भित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । कांग्रेसको ओरालो साखले सिंगो नेतृत्व तनावमा परेको छ । पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्दा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने पक्कापक्की जस्तै छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको दाबीअनुसार पहिलो चरणमा मंसिर १० गते चुनाव भएका ३२ जिल्लामा माओवादी र एमालेले बढी सिट जिते पनि दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ४५ जिल्लामा कांग्रेसको परिणाममा सुधार हुनेछ । तर, खाँडले भनेको त्यो ‘सुधार’ ले कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाउने र सरकारमा लैजाने सम्भावना लगभग सकिएको छ । अब सबैको ध्यान नेपाली कांग्रेसको आगामी भविष्य र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति छ । देउवाले पार्टीको संगठन मजबुत बनाउन नसकेकाले चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी भइरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वबाट सरकारमा रहेकाहरु अब सिंहदरवारमा पस्न लाज मान्नेछन् ।
कांग्रेसले चुनाव हार्नुको धेरै कारण हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व शैली नै प्रमुख कारण मान्ने धेरै छन् । देउवाको कार्यशैली र संगठनभन्दा बढि नेतृत्वको दम्ब देखाउने प्रवृत्तिले आलोचना बढेको हो । देउवा त तनावमा छन नै ? अब कांग्रेस नेतृत्व कोइराला कि पौडेल रु बहस सुरु भएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले तत्कालिन माओवादीसँग दिल्लीमा गरेको १२ सहमतीको बिरोध गर्दा देखिनै पार्टी आरोलो लागेको आंकलन छ ।
त्यसो त कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा जनमत निर्माण गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको मात्रै दोष हुँदैन । सबै नेताले आफ्नो क्षेत्रमा हारको जिम्मेवारी लिनै पर्छ छ । तर देउवाकै केही कारणले गर्दा समग्र पार्टी पंक्ति कमजोर भएको भने अवश्य हो । देउवाले प्रधानमन्त्री पदको लोभ नगरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । माओावादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका देउवाले चुनावी नतिजा र एमालेको चलाखी पहिलै आँकलन गर्न सकेको भए कांग्रेस कमजोर बन्ने थिएन ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन नलगाएर दाहालकै नेतृत्वमा सबै चुनाव गराउन देउवा तयार भएको भए वाम गठबन्धन बन्ने थिएन । तर यो टिप्पणी अहिलेको नतिजापछिको भएकाले यसमा देउवालाई दोषी देखाउनु त्यति उचित नहोला । तर देउवामा दुरदर्शिता भने नभएकै हो । अर्कोतिर स्थानीय निकायको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकामा दाहाल पुत्री रेणु दाहाललाई समर्थन गरेकै कारण पनि देउवाले आलोचना सहनु प¥यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री नभएको भए वा दाहाललाई निरन्तरता दिएको भए अनि चुनावमा अपेक्षाकृति नतिजा नआएको भए पनि देउवा नै निशानामा पर्ने थिए ।
तर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा होस वा पार्टीको । दूरदरर्शीता र परिपक्वता देखाउन सकेनन् । प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सवालमा पनि देउवा चुके । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई पछाडि राखेर आफू अनुकूल मानिएका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनउने प्रयास गरे । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा कांग्रेसले नै लग्यो । त्यसलाई पनि नागरिकले सहजै लिन सकेनन् । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कार्कीमाथि अनावश्यक रुपमा महाअभियोग लगाउन खोजेको आरोप देउवा माथि लाग्यो ।
राजदुत नियुक्तिमा पनि देउवाले जनमत खस्केला कि भन्नेतिर ध्यान दिन सकेनन् । यसअर्थमा देउवा संगठनभन्दा शक्तिमा बढि केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिएन । पछिल्लो समय आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचार गर्नुबाहेक जनताको मन जित्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । त्यसैगरि पार्टी भित्र आरजु भाउजु हावी हुनु र वालुवाटार सिमित घेरामा घेरिनु पनि देउवा र कांग्रेसका लागि प्रतिउत्पादक भयो । जे जति कारण भए पनि नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि अहिलसम्मकै कमजोर हैसियतमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । अब कांग्रेसले आफूलाई कसरी मजबुत बनाउने र अर्को पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा पुनः बलियो भएर आउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि देउवाले नेतृत्व छोडेर को अगाडि बढ्ने बहस भइरहेको छ । कोइराला परिवारबाट शसांक ,शेखर ,सुजता पनि एक कित्तामा उभिएइर आफ्नो गुटको उपस्थिती अनिवार्य ठानेकाछन् । त्यसो त यअअघिको महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा पनि आवाज उठ्दै आएको छ । अब आजा उठाउने मात्रै होइन, कांग्रेसलाई मजबुत बनाउनका लागि नेतृत्वको बारेमा उचित कदम चाल्नैपर्ने कुरालाई कांग्रेसीजनले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसो त देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ नत्र कांग्रेस बलियो बन्नै सक्दनै भन्ने होइन । नेतृत्व परिवर्तन नगरीकन पनि पार्टीलाई सामुहिक प्रयासबाट बलियो बनाउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसले यसपालि व्यहोर्ने पराजय सामान्य हुने छैन । पहिलो संविधानसभामा हारेको स्थितिमा भन्दा पनि नराम्रो पराजय ठहरिनेछ कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनाव । अब ५ वर्ष बहुमत पाउने दलले कांग्रेसलाई सत्ता बाहिरै राख्ने अवस्था आउन सक्छ । त्योबेलामा कांग्रेसभित्र नेतादेखि कार्यकर्तामा चरम निराशा र विग्रह आउन सक्छ ।
त्यो बेला देउवाले नैतिकताका आधारमा पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिन्छन् या दिँदैनन् ? त्यो अहिले नै बताउन सकिँदैन । नैतिकताका आधारमा देउवाले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनु पर्ने आवाज उठेको छ । विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि एमालेका तत्कालीन प्रमुख माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सभापतिबाट राजिनामा दिएनन् । त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिने चर्चा चुलिएको थियो । अब देउवाले के गर्नेहुन् । हेर्न बाँकी छ ।